Ithala lisolwa ngokunqinda intuthuko yasemakhaya – Bayede News
Enye yezinto eziseqhulwini kuHulumeni waseNingizimu Afrika
Abagilwa? UMnu uNtombela noSomlomo uManana
Enye yezinto eziseqhulwini kuHulumeni waseNingizimu Afrika wukuthuthukisa izindawo ezisemakhaya. Lezi yizindawo ezabe zikhishwe ngaphandle komnotho nentuthuko yengqalasizinda yimibuso yangaphambilini. Enye yalezi zindawo yidolobha uLundi KwaZulu-Natal. Leli dolobha elike laba yinhlokodolobha kaHlulumeni wakwaZulu libukeka lithuthuka yize emiyakeni eyedlule lagqemeka engeqiwa ntwala ngesikhathi isinqumo sepolitiki sathi inhlokodlobha ayibe seMgungundlovu.
Lesi sinqumo sashiya umnotho wendawo usesimweni senhlekelele noma liyasimama kwaba wumoya wempokophelo wezakhamizi zakule ndawo ezatabalasa kunzima. Iqhaza likaHulumeni wendawo, owesifunda Kanye nowesifundazwe ekubuyiseni le ndawo esimweni sakudala nokulekelela ekubeni ngelinye lamadolobha asemakhaya athuthukayo eNingizimu Afrika kalingatshazwa. Njengemizamo yokwenza
uLundi lufane nezinye izindawo omunye wezakhamuzi zakule ndawo, uMnu uZakhele Advocate Ntombela eminyakeni eli-19 ube yingxenye yalabo abathuthukisa umnotho wendawo. Waqala amabhizinisi; elamatende Kanye nelokwakha. Kwathi ngaphansi
kwesikhwama iZakhele Ntombela Family Trust eminyakeni eyisi-9 eyedlule waqhamuka nombono wokwakhiwa kwenxanxathela yezitolo i-Ulundi Shopping Centre. Ngokwezilinganiso lo msebenzi wabe ulinganiselwa ezigidini ezingama-R400. Namuhla uNtombela ukhala ngesikhungo saKwaZulu-Natal esabe sakhelwe ukulekelela abanjengaye nendawo enjengoLundi ngokunqinda indawo yangakubo ekutheni ithuthuke.